AKHRISO: Mid kamid ah Beelaha Puntland oo qoraal GARNAQSI AH u dirtay M/weyne Deni.
November 15, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 0
GAROOWE(P-TIMES) – Beesha Kaskiqabe oo kamid ah beelaha Puntland ayaa qoraal ay ugu magac-dareen Garnaqsi u gudbiyey Madaxweynaha Puntland Siciid Deni, si wax looga qabto waxyaabaha ay tabanayso beeshan oo aan saami qeybsi ku laheyn gudaha mandiqada.
Qoraalka oo nuqul kamid ah lasoo gaarsiyey PuntlandTimes, waxaa lagu xusay in ay Beeshu doonayso in ay saami kahesho Kuraasta Aqalka Sare ee mataalada Puntland, ayna kamid tahay beelihii wax ka asaastay Puntland, iyadoo aan helin wax matalad ah, qoraalka ayaa u qornaa.
Ka: Beelaha Kaskiqabe, ee degan Puntland.
Ku: Madaxda Puntland & dhammaan isimada iyo aqoonyahanka beelaha ay bahwadaagta yihiin ee ay Puntland wada dhisteen.
Waxaan rabnaa in aan halkaan kusoo gudbino dood aanan cidna ku eedeynayn cidna ku dhaleecaynayn, si gaar ah aan cid loogu beegsanayn, Balse aanu rabno in ay noqoto iftiimin arrimo siyaasadeed oo beelaha bah wadaagta ah ee Puntland wada dega, oo wada dhistay horay uga khaldamay ilaa hadana cid garowshiyo ka bixisay iyo cid u istaagtay in dib loo saxo aysan jirin. Beesha Kaskiqabe waa beel ballaaran oo ka mid ah beelaha Harti kana mid ah beelaha degan Puntland, Beeshu waxa ay si rasmi ah gudaha Puntland deegaanno ugu leedahay Gobollada, Bari, Karkaar, Sool iyo Nugaal.
Beeshu, Waxa ay beelaha degan Puntland la wadaagtaa nolosha Mandiqada ka jirta, haday noqoto, in cashuur la bixiyo, ama laga qayb qaato difaaca Puntland iyo wax kast oo dadka Puntland degan ay kaga qayb qaataan jiritaanka iyo daafaca Puntland.
Sidoo kale, Beeshu waxa ay qayb ka ahayd oo kaalin lixaad leh ka qaadatay yagleelki Puntland 1998, balse miisaan siyaasadeedki awood qaysbsiga beelaha lagu saleeyey markii uu khaldamay waxaa lagu garnaqsaday in Nidaamki ku dhisnaa siyaasad beeleedki markaas la qaatay 3 sano lagu dhisayo haykal dowladnimo dibna aan loogu noqon doonin oo nidaam dimuquraadi ah loo guurayo 3 sano gudahood, taasi oo Beeshu berigaas ugu tanaasushay si bal marka hore unkidda iyo afartan bixinta Puntland loo gaaro.
Nasiib darro, 22 sano ka dib, iyadoo Beeshu beelaha kale Ee Puntland ay wada dhisteen ula siman tahay ama qaarkood ka badsatay wax kasta oo Puntland wada jirkeeda iyo jiritaankeeda lagu difaacayo hadana beeshu wax nafci ah ama metelaad ah kuma qabto Puntland waxayna weyday tii ay ka heli lahayd dowladda Federaalka Soomaaliya, taasi oo iyaduna ka dhalatay tanaasulkii Beeshu 1998 muujisay in ay 2004 heer federaalna ku qado, maadaama hab qaybsigii baarlaamka federaalka ee 2004, qaybti beelaha Puntland laga dhiraan dhiriyey Puntland.
Waxaynu ognahay in maantay Siyaasadda Soomaaliya ay tahay siyaasad beelaysan. Taasi oo ah arrin daahinaysa horumar ka ay Soomaaliya hiigsan karto. Waxaa kale oo aynu ognahay siyaasaddu in ay hagto dhinacyada kale ee la xiriira baahida deeganada iyo bulshada degan. Sida, dhaqaalaha iyo arimaha bulshada, Ka maqnaanshaha Beesha kaskiqabe ay kuraasti Puntland ay ku lahayd ka maqnaatay waxa kaga lumay arrimahaan soo socda:
Beesha Kaskiqabe waxa ay ka maqan tahay baarlamaanka Puntland oo 22kii sano uu jiray aysan wax metelaad ah ku lahayn waana halka ay ka dhisan tahay Dowladnimada Puntland oo laga doorto hoggaanka ugu sarreeya Puntland, lagana soo saaro Xeerarka degaanka lagu dhaqo, sidoo kale waxay xubanaha baarlamaanku qabtaan shaqo kale oo ah metelaad, tusaale haddii loo baahdo in dowladda xiriir lala yeesha waa cidda isku xiraysa beesha/deegaanka iyo dowladda, haddii dhalinyarada reerka ee wax barashada raba lala raadinaayo Deeq waxbarasho waa cidda raadisa, haddii shaqooyin soo baxaan waa cidda dhalinta wax soo baratay ee reerka wax la raadisa. Innaga oo og Baarlamaanka puntland in ay kulli u qareemaan danaha reerayowga ay kuraasta ugu fadhiyaan maadaama ay qaab beelaysan ku yimaadeen balse aysan qaab deegaan ku iman, tani waa xaqiiqo kharaar. Guud ahaan beelaha metalaadda golaha shacabka Puntland ka maqan idil ahaan waxa ay luminayaan inta aan soo xusnay, iyo in kale oo ka badan oo aynaan kor iskugu sheegayn, oo Soomaalida ayaa waxa ay dhahaan: Gacma geel jire hoos baa loo dhaqaa.
Haddaba, waxaan soo qaadanaynaa waxa ay Beesha Kaskiqabe ku weyday metelaad la’aanta dhanka Golaha Shacabka ee Puntland.
Beeshu Puntland kuma lahan Wasiir ku metela Golaha wasiirada oo ah hay’adda Fulinta oo dhammaan shaqooyinka dalka ka socda fulisa.
Beeshu Puntland Kuma lahan agaasimayaal mid Guud iyo mid Waaxeed toonna, iyada oo dhalinteedi wax baratay wasaaradaha volunteer ku wada joogaan.
Beeshu maleh jagooyinka kale ee dowlada laga qabto, sida agaasimayaasha hay’adaha madaxa banaan, Garsoorka, hoggaanada kala duwan ee cidanka iyo kuwa kale. Tusaalayaashani waa kuwo aad u kooban.
Waxaa tusaale ah waxbarashada lagu helo magaca Puntand, waxaa lagu qaybsadaa xafiisyada dowladda ee ay ka howlgalaan Xubnaha Golaha Wasiirada, waxaana marag ma doonta ah in ardayda kasoo jeeda beelaha ka maqan miiskaas wax qaybsiga in ay dhaawac u gooni ah la dhutinayaan, waana arrin dhacdooyinkeeda la hayo.
Si taas la mid ah, Deegaanada Beeshu degto waxa ay adeeggi dowladnimada wax badan oo ka mid ah u heli la’yihiin metaaladaas siyaasadeed oo maqan darteed, ilaa heer ay gaartay adeeg badan oo dowladda xaq loogu lahaa in ganacsato beesha ahi maal geliso markii laga quustay xukuumadda Puntland in ay fuliso, iyada oo kari kartay.
Dhanka Daafaca Puntland iyo Amaanka.
Beeshu waxa ay ka mid tahay beelaha ugu badan ee dhalintoodu Puntland furimaha daafaca joogaan, kana qayb qaataan difaaca iyo nabad sugidda, iyaga oo nooc walba oo ciidan Puntland ka jira laga helayo tirada ugu badan in ay ka yihiin, waxaana la heli karaa liis dheer oo ah dhalintii beesha kaga dhimatay dagaalada ay galeen askarta Puntland, haday ahaato Xadka Somaliland, Gaalkacayo iyo Buuraha Galgala iyo kuwo ku dhaawacmay oo ilaa hadda la il daran naafadii ka soo gaartay dagaaladaas, dhib iyo culaysna ku haya naftooda iyo ehelkooda.
Dhanka Nafciga marka ay noqoto beeshu iyada oo askarta ugu badan leh ayaa waxaa hogaamiya Saraakiil beelo kale oo aan ka derejo iyo tababar sarrayn, balse ka hela dallacaada xafiisyada sare ee dowlada, oo iyagu metalaad beelaysan aysan ku lahay, waana nasiib darro in nidaamka ciidanku ka marnaan waayo baritaarka .
Dhanka Dowladda Federaalka
Beeshu kuma leh metelaad baarlamaanka dowladda Federaalka ah Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare midna, waxayna taasi sababtay in wixii kaga xirnaa beesha dowladda dhexe ay waydo haddii ay ahaato dhanka arimaha bulshada sida Waxbarashada iyo Caafimaad ka iyo Shaqooyinka kala duwan ee laga helo dowlada dhexe, oo aynu ognahay in ay tahay xuquuq madani ah oo asaasi ah.
Ugu damayn, Haddii aan tirino wax ka maqan beesha iyo tabashada ay qabto ma ahan wax dhamaanayaa, balse waxaa in laga garaabo u baahan Beesha intaas le’eg ee ka mid ah beelihi Puntland wax ka dhistay, jiritaankeeda qaybta ka ah hadana aan wax metelaad ah ku lahayn golaha shacabka ee labada heer ee dowladnimada Soomaaliya, oo muujisay dulqaadka 22 sano muddo ku siman.
BAAQA IYO SOO JEEDINTA BEESHA KASKIQABE.
In wixii hadda la sixi karo la saxo, sida in beeshu ay metelaad buuxda ka hesho Golaha Fulinta oo magacaabid ku yimaada si sahlanna loogaga eed bixi karo.
In Baarlamaanka Puntland aan doorasho dame lagu gelin iyada oo beesha Kaskiqabe aysan wax metelaad ah ku lahayn, Xubnaha ay mudan tahayna loogu daro, loona furo Baarlamanka Puntland, sida ugu dhakhsaha badan.
In Beesha kaskiqabe meel loo saaro kursi Aqalka sare ah inta laga gaaraayo in ay shacabku wax soo dooranayaan lagana baxaayo metelaadda ku dhisan Qabiilka, balse aysan dhicin in beelo Golaha shacabka kuraas ku leh ay ku rakaataan kuraasta aqalka sare ee Puntland ay ku heshay magaca Puntland oo ah meteladaas Beelaha Puntland dhex yaal u ah.
Si kobaca dowladnimada Puntland iyo wadajirka reer Puntland aynu u ilaashanno waxaa lama huraan ah in wixii beelaha Puntland ka dhaxeeya aysan cid gooni ahi ku xarragoon ee aynu xaqsoorka iyo cadaaladda dhexdeenna ah ilaalino, lana saxo wixii horay looga ilduufay.
Beeshu waxa ay dhammaan beelaha Puntland ugu baaqaysaa ilaalinta wada jirka Puntland, ka qayb galka dib u dhiska dowlanimada Soomaaliya. Waxayna si cad uga digaysaa Sedbursiga iyo kala irdhaynta beelaha Bahwadaagta ah ee wada dhashay waxna wada dhistay.
Beeshu waxa ay beelaha ay bahwadaagta yihiin ee Puntland ugu baaqaysaa in la kala garqaato, tabashooyinka jirana si hufan oo aan runta laga cararayn ama aan ceeb loogu arkayn aynu garowshiyo uga bixino, waxna ka qabano arrimaha mudan in wax laga qabto, inta arrintu wada hadalka iyo garnaqsiga ay joogto.
Ugu damayn Beeshu waxa ay ku adkaynaysaa dhammaan waxgaradka, Qurba joogta iyo cuqaasha jifiyaha Beesha, si gooni ah jifayaha koonfurta dega ee degmooyinka Qoryooley iyo Kismaayo, in ay kasoo qayb galaan Shirweynaha SAMAWADE ee Beeshu ka qabsanayso Degmada Shaxda, ee Gobolka Karkaar-Puntland.